Omunye yamaprojekthi, futhi unike eziningi imizwelo eyakhayo, izinhlobo ukudoba ebusika is ekubambeni perch phezu balancer. Lokhu umbala umhlaseli ezimthende uzabalaza umsebenzi wayo kusukela enamathela ichibi lokuqala nge ice futhi kuze kube isikhathi lapho e medium aqueous ngeke obuzwiwa nokushoda umoya-mpilo. lolo kuhle kakhulu redfish lapho ebelidoba iqhwa zokugcina kuyinto rocker, futhi lapho gluhozimya ngeke miss it, lapho eqhubeka ekuzingeleni.
Indlela ukubamba perch balancer? izimfihlo Special ngakho. Ngokusho zangaphandle idatha rocker yayo has a zifana uqine kakhulu ukuba izinhlanzi ezincane, okusho ezingaba inyamazane perch ngenkathi ukuzingela. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ukulingiswa, hhayi kuphela gazinga nezinhlanzi ezincane, okuyinto ngeke sisaphuma, futhi kwenza kuphela ukunyakaza ngapha nangapha, ngokuba zasezixhotsheni esinzima kakhulu.
ukudoba Winter perch phezu balancer ikhange nangesinye isizathu - Angling izinhlanzi mhlawumbe abandayo olunzima, njengoba asikho isidingo ukususa uboya amagilavu efudumele futhi unamathele phezu izimpethu hook, bloodworms, noma okunye okunamathiselwe, ngaphandle ukususa izinhlanzi lakhe laselibambelela. Lokhu inzuzo ukunika inzuzo enkulu ngokuhamba kwesikhathi, okuyinto eqolo nge perch ezinhle okuhlabayo, futhi adambise nenduduzo umdobi. Ezinye zazo yilezi evame kakhulu, ngisho naphezu ekuphunguleni catch, musa afuna ukuyidlulisela lolo best ashubisa umkantsha, ngoba nje engathandi okukhulelwa ukuzigqaja nge umlomo wombhobho on izimpethu hook noma bloodworm.
abaningi kakhulu ngokuvamile okungalungile, bekholelwa ukuthi perch ku lwezimiselo kwenzeka kakhulu uma kuyinto encane ngobukhulu kodwa akunembile. Ebusika, ngisho iphezulu ezincane ngenkathi esebenzayo iluma kahle ukuthwala rocker, ogama ubude 6.8 amasentimitha. Amakhophi emikhulu ngokulangazela ukusheshe balancers eyenzelwe perch noma Pike. Ngakho-ke, thina akumelwe lokugxila kuphela ezincane (30-50 mm) amamodeli we ukudla okuhlukahlukene, kodwa futhi izame ngesibindi nge rocker namasayizi amakhulu. Uma udlala nge-rocker enjalo ivele iyehla iyenyuka olukhudlwana esikhaleni amanzi, futhi kuzobonakala kakhulu izinhlanzi ibanga kude kwi kakhulu ezikhangayo kuye.
Kusetjentiswa kahle zibheke enkulu usayizi ukudla okuhlukahlukene e amanzi ukujula okukhulu futhi zamanje kancane. Ukuba isisindo xaxa, izicupho ezifana usebenze cwilisa esheshayo, onikeza inzuzo ekugcineni izinhlanzi iphakethe eliseduze imithombo, futhi lapho esitholakalayo okwamanje ibhalansi ukubhidliza axoshwe maqondana okhuthaza "efanele" umdlalo wakhe.
Hlobo luni ukuma, futhi yini umbala kufanele kube lolo ukubamba perch balancer kuhlulekile? Ukusetshenziswa ukulinganisela ezithile ku ichibi efanayo, kodwa ngezinye izikhathi ezahlukene ukunika zahlukile esinye kwesinye imiphumela. On perch okuhlabayo bathonywe izinto eziningi - iyona ukujiya iqhwa ku ichibi, othinta ukukhanyisa emanzini, ngesikhathi catch (pervolede, gluhozime, phezu eqhweni zokugcina), isikhathi nsuku zonke (kusihlwa, ngosuku, ekuseni), isimo sezulu njll Kunzima ukunikela ihlathululo yokuthi perch abalumayo kahle kakhulu lolo ke kungazelelwe it ukhetha isimo rocker nombala. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kukhona ezihlukahlukene lokhu uhlobo lokudla kodobo. Inethiwekhi ukuhweba we balancers ngokuchichima umane dazzled futhi ngezinye izikhathi isinqumo esinzima kakhulu.
Ukuze perch phezu balancer ehluleka, udinga ukuthenga amaningi njengoba ezinhlanu noma eziyisithupha ukudla okuhlukahlukene emasayizi ngayinye (3, 5, 7 amasentimitha). Umbala balancers kumelwe kuvumelane umbala kwemvelo carp umndeni izinhlanzi gazinga futhi perch encane. Ngokusho oyiphawulile eside, ukuyenga Umbala nje enjalo kukhona jikelele nganoma yisiphi emanzini amaningi. Ngakho-ke ukubamba perch ebusika kufanele uqale esenabo, khona-ke vele kungenzeka ukuze udlulele ucwaningo.
Catching ku zherlitsy - ifa lokhokho
Ilyas. okusho kwegama: ubunjalo nesiphetho
I-ATP: iyini futhi yidleni?